Jenereta Sets, Spare Zvikamu zveJenareta Sets - Yako Kufanana
5kw jenareta jenareta ine Invention Patent, Dhizaini Patent uye Noise iri pazasi pe70db (7m), hunhu hukuru hausi kurasikirwa nesimba kunyangwe mushure mekushanda kwenguva yakareba, uye tora 100% yemhangura waya alternator uye yedu yekusiya mativi ekuona ari akaomarara. Nezve iyo nyore kugadziriswa, tinogona kuchinja kabhoni brashi kunze chaiko. Mudziyo mumwe unotakura maseti zana nemakumi mana nemasere. chii chimwe, ine 360 ​​° mavhiri anotenderera, anogona kufamba akasununguka. Yepamusoro yakarongedzwa zinc-ndiro mukati uye kunze kwetangi remafuta ita shuwa kuti hapana dhiziri inodonhedza.
10-1000kva Chinyararire Type Diesel jenareta Set
Chinyararire mhando dhiziri jenareta ine chinhu chakakombama-chakasarudzika chakashongedzwa canopy mukana ndeye Yakaderera inoshanda tembiricha uye ruzha garandi. Aslo iyo alternator ndeye 100% yemhangura waya. Isu tinotora top zinc-plate peturu tangi nemaawa masere tichienderera tichimhanya. Hunhu hwemhepo firita bepa chiKorea chakatumirwa kunze. Ndezvipi zvimwe zvatinoshandisa level 8 shockproof screw. Uye iyo pre-set forklit nzvimbo (modhi yakagadzirwa) kuvimbisa nyore mushure mekutengesa sevhisi.
Ngarava yerudzi jenareta seti ine yakakosha yakaderera ruzha mashandiro uye muganho weruzha ndeye 75dB (A) (1m kure neyuniti) .Zvese dhizaini yeyuniti iri compact mune chimiro, diki muvhoriyamu, inoverengeka uye yakanaka muchimiro. Iyo Multi-rukoko nhovo impedance mismatch kurira kuputira kavha. Uye iyo inodakadza ruzha kudzikisira mhando mizhinji-chiteshi kudya uye kupera, kutora uye kupedza mweya chiteshi, kuona yakakwana simba kuita kwechikwata. Isu tinoshandisa hombe impedance inoumba silencer uye hombe inokwana mafuta mafuta anopisa. Uyezve, iyo yakakurumidza kuvhura ndiro yekuvhara iri nyore kwazvo kugadzirisa.
Iyo jongwe renhare jenareta yakaiswa neyakaumbika uye inotakurika dhizaini.it iri nyore kwazvo kuti ibatwe neanoshanda chete. Yakanakira madiki uye epakati nzvimbo nzvimbo dzekushanda. Tora akawanda anovhunduka ekushomeka dhizaini dhizaini, yakanakisa yekurwisa-kuvhunduka mashandiro uye inogona kushandisa zvakavimbika mune yakakwira frequency kuvhunduka nharaunda.Tora zvakatipoteredza mwenje chiwanikwa zvinhu uye yepamusoro-tech yekupfira tekinoroji, isina mvura, isina guruva, antirust uye yakakodzera kushanda kunzvimbo yekunze kwenguva refu. Yakakwana yemagetsi kuenderana uye haigone kukonzera kukanganisa kwehutachiona hwekutapurirana; Iyo yose mwenje inotora yakatumirwa kunze simbi yepamusoro zvinhu, mhando yepamusoro uye yakavimbika uye inoshanda mushe munzvimbo yakaoma.
YAKO SESIMBA SIMBA (FUZHOU) CO., LTD., Ndeimwe yevashoma veOEM vagadziri muChina vanounganidza dhizaini yekugadzira, yekugadzira uye yekutengesa mune imwe, iine vanopfuura 30 patent, inonyanya kugadzirwa kwejenareta seti uye nenhumbi dzayo. , Uye ine makore anopfuura makumi matatu ekuziva ruzivo mukutsigira zvikamu .Iyo kambani yakafambira mberi michina yekugadzira uye yakakwana nzira dzekuyedza, ine boka revashandi vepamusoro uye vehunyanzvi, uye inokwanisa kugona. Main zvigadzirwa zviri 1-5 kw mhepo-dzaserera jenareta rinovira uye 10-2000 KW mvura-haachandidi jenareta rinovira.